Soro Ohere mepere Spinning Tournament ma merie - pisklak.net
Soro Ohere mepere Spinning Tournament ma merie
Casino Oke nganga na-enye ohere iji sonye oghere asọmpi na-atụgharị miniature bụrụ akụkụ nke gburugburu na-akwụghachi ụgwọ. Nke a bụ ọhụrụ ọhụrụ na anyị ulo oru na-eme ka gị gaminggba Cha Cha ahụmahụ ọbụna mma. Ka anyị tụgharịa ma merie!
Ohere mepere Championship kọwara
Nke mbu, igaghi agha iji nara ihe nrite. Naanị igwu egwu nwere ike ime gị Onye mmeri Twist na-achịkọta ihe nrite kwa izu. Ya bụ, Tuesday ọ bụla anyị ga-ebido Spinner Winner Tournament na-enye gị ohere ịbanye gburugburu nke ndị mmeri. Ga-atụrịrị, ị ga-agbagharị. Naanị, ka ị na-egwu egwu, ị ga-enwetakwu.
Otu ugboron’izu, ndị ọrụ iri ise kachasị elu ga-eke ihe nrite nke $2500 t self na ibe na 1800 spins! Gwọ ọrụ nke mbụ bụ $400 t self. Ndị na-egwu egwuregwu na-esote ọnọdụ atọ sochirinụ ga-enweta ego na self maka ndị ọzọ niile anyị kwadebere free spins un free processors, karị.
Iji bụrụ onye mmerin’egwuregwu oghere a, ọ dịghị mkpa maka mbọ ọzọn’akụkụ gị. Naanị ịga n’ihu na-egwu oghere ndị kachasị amasị gị ma lelee onye ndu anyị iji hụ ọkwa. Tupu ịbanye, biko gụọ usoro.
Naanị oghere egwuregwu na-adabere n’akụkụ isi. A ga-emelite ndị ndu ahụ kwa awa 24 (maka egwuregwu nke ụbọchị abụọ gara aga). Nrite ga-akwụ ụgwọ na Wednesde ọ bụla. Onye mmeri Spinner na-agba ọsọ kwa izu website Id Tuesday ruo Mọnde. Enwere ike ịhazi Spinner Winner Ranking dabere na ọnụọgụ self love nkwụnye self indulgent a na-ekwun’oge izu ọrụ. Naanị ndị egwu only opekata mpe self appointed 3 nwere ike isonye na asọmpi ahụ.
Onyinye self love nwere 1x wagering na enweghị mgbochi ndị ọzọ. Onyinye Chip nwere 40x wagering na 5x max self na-emeghe maka egwuregwu na-enweghị ọganihu. Onyinye Spin efu nwere 45x wagering na $50 max self maka oghe maka oghere na-enweghị ọganihu. Max nzọ kwa aka bụ $10 (ibe & twists ).